Nandrolone Undecanoate Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Raw Nandrolone Dufanka aan la karin (862-89-5)
Nandrolone Undecanoate waa steroid caan ah kaas oo soo saara tayo murqo oo tayo leh. Sidoo kale waa miisaan lumis oo kaa caawiya inaad miisaan ka dhumiso si aad u yar adigoo hoos u dhigaya xaddiga dufanka la nuugo.
Raw Nandrolone Dareemo aan lakeenin (862-89-5) video
Raw Nandrolone Dufanka aan la karin (862-89-5) Sharaxa
Raw Nandrolone Dufanka aan la karin, oo loogu yeero Dynabolon, ayaa si cad ujirta aan loogu talagelin maamulka afka. Daawada Nandrolone Necrolone Undecanoate waa qaab la isku duro oo ah nandrolone anabolic steroids, sida Nandrolone Decanoate (Deca-Durabolin), oo loo isticmaalo inuu soo saaro mid degan korodhka weyn ee xoogga leh iyo 'tayo sare' (tiro lean ah oo u dhowdahay inuu sii ahaado isticmaalka daroogada). Waxyaabaha asaasiga ah ee daroogada ayaa ah nandrolone anabolic steroid. Cunto-saaraha halkan lagu isticmaalo waa mid ka mid ah halbowlaha carbon ka badan tan dib-u-goosta, taasina waxay keentaa deyn daawo aad u dheer oo muddo dheer ah goobta lagu duro. Necrolone undecylate waa unugyo firfircoon oo soo saara tayada tayada, mudada dheer ee muruqa. Sababtuna waxay tahay sababtoo ah mudada dheer ee daawada daroogada (agagaarka 18). Xitaa iyada oo aan lahayn daaqada dheeraadka ah ee dheeraadka ah, Root Nandrolone Undecanoate budada ayaa si fudud loo xakamayn karaa marxalad kasta 1 ilaa toddobaadyada 2, taas oo ka tarjumaysa dabeecad aan dhaqdhaqaaq lahayn. Waxay ahayd mid si aad ah u taageertay ciyaartoyda iyo jir-dhiseyaasha awoodda ay u leeyihiin in ay dhiirigeliyaan guulo isdaba-joog ah oo ku yimaada tiro lean oo leh saameyn ku yeelashada estrogenic ama orrogenic.
Raw Nandrolone Dufanka aan la karin (862-89-5) Smamnuucista
Product Name Raw Nandrolone budada aan qotomiyo
Magaca Kiimikada Nandrolone undecylate; 862-89-5; Dynabolon; Raw Nandrolone budada aan qotomiyo
brand NAme Dynabolon, Dynabolin, Psychobolan
Fasalka Daroogada Androgen; Steroid anabolic; Qalabka Androgen;
barafku Psaliid 53.2 ~ 54.5 ℃
karisaaning Psaliid 548.5 ° C at 760 mmHg
Color budada crystalline cad
Application Rooga Nandrolone Noocyada qashinka nadiifka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiirrigeliyo miisaan korodhka ka dib qalliinno ballaaran, infakshan dabadheeraad ah, ama jahawareer daran, iyo xaalado kale oo keenaya miisaan kordhay ama dayactir. Roog Nandrolone budada aan la karin ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si loo yareeyo luminta murqaha oo ay keento daaweynta corticosteroids iyo in la yareeyo xanuunka lafaha ee la xariira osteoporosis.
Waa maxay macdanta loo yaqaan "Raw Nandrolone" ee macmacaanka (862-89-5)?
Nandrolone qashin-saarid budo ah waa steroid caan ah oo ka kooban hormoonka firfircoon ee steroidal Nandrolone oo ku xiran dhererka weyn ee dheef-shiidka. Aad bay u egtahay Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin), Nandrolone's estecanoate ester waxoogaa weyn ayaa bixisa daaqad lagu daweyn karo oo dheer.
Qaybtan gaarka ah ee nandrolone aan qarsoodi ahayn waa isla abaabul ah in Organon uu isticmaalo diyaarinta testosterone Andriol. Halkan waxaa ku yaala dhismaha si cad looguma talagelin maamulka afka, si kastaba ha ahaatee bedelka naqshadeynta in uu yahay firfircooni dheer, saliid ku salaysan xakameyn.
Sida Raw Nandrolone Nadiifinta Duufaanta (862-89-5) shuqullada
Nandrolone Undecanoate (Dynabolon) budo waa qaab la bedelay Nandrolonein kaas oo karboksylic ester (unecanoic acid) ku xiran tahay kooxda 17-beta hydroxyl. Isticmaalidda steroids ayaa leh dabayl aan ka yarayn steroids oo lacag la'aan ah waxaana lagu siidaayo si tartiib ah meeshii laga duray. Marka dhiiga la gooyo, qashin-qaadaha ayaa laga saaraa si uu u soo saaro bilaash ah (firfircoon) maqaar. Isticmaalida steroids ee loo yaqaan 'steroids' ayaa loogu talagalay inay kordhiso daaqadda daaweynta ka dib codsigeeda, taasoo oggolaato cirbado badan oo ka baxsan steroids bilaash ah (uncerified). Nandrolone Undecanoate (Dynabolon) budada waxaa loogu talagalay in si tartiib ah loo sii daayo Nandrolone gudaha 3 ilaa todobaadkii 4.
Raw Nandrolone Dufanka aan la karin (862-89-5) Qiyaasta
Nandrolone Undecanoate waa unugyo wax ku ool ah oo soo saara tayada tayada leh ee mudada dheer socota. Sababtuna waxay tahay sababtoo ah mudada dheer ee daawada daroogada (agagaarka 8). Qiyaasta ugu caansan waa 3-4 ampules (241.5 ilaa 322mg) usbuuc kasta, heer ay tahay inay ka soo baxdo faa'iido aad u badan oo ku saabsan miisaanka cusub. Waa ku filan tahay in la qaato 40-70mg ee Nandrolone budo aan qasan lahayn maalin kasta xilliga ka baxsan. Tani, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato hal cirbad toddobaad kasta. Si loo kordhiyo waxtarka steroid, inta badan xubnaha jirka waxay kala qaybin doonaan duritaanka 2 cufnaanta baaxadda yar ee siman ee usbuucii. Hawshani waxay yareyneysaa miisaankii la isku duro. Waxaad kordhin kartaa qiyaastaada haddii aad u dulqaadato 300-400mg iyada oo aan wax dhibaato ah. Inkastoo aysan jirin baahi loo qabo qiyaasta sare, waxaan u baahanahay inaan ogaano in ragga intooda badani ay taageeri doonaan 60mg usbuuc kasta iyadoon wax dhibaato ah la kulmin. Waa ku filan tahay inaad xoqdo 400mg. Waxay u badan tahay in ay la kulmaan saameyno taban oo xun haddii ay dhacdo inaad kordhiso qiyaasta. Xaaladaha qaarkood, saameynaha xun ayaa laga yaabaa inay ka badan yihiin saamaynta wanaagsan, inkastoo ay taasi ka duwanaan karto qof qof kale.
Raw Nandrolone Dufanka aan la karin (862-89-5) Faa'iidooyinka
Nandrolone budada aan lakulmaynin waa steroid caan ah kaas oo soo saara tayada tayada, mudada dheer ee muruqa. Nandrolone Nadiifinta budada / Dynabolon wuxuu yahay steroid heer sare ah ee guulaha badan ee xilli-ciyaareedka iyo kordhinta cayaaraha guud, shakhsigu wuxuu heli karaa faa'iidooyin isku mid ah Dynabolon oo leh noocyada kale ee Nandrolone ee hadda jira. Tababarka dhabta ah ayuu hoos udhigaa unugyada muruqyada, laakiin bogsashadu waa waxa ka dhigaya mid xoog badan, iyo waxa ka dhigaya inuu koro. Iyadoo aan loo eegin ujeedadaada isticmaalka, saameynta Nandrolone Undecanoate Powder / Dynabolon ee dulqaadashada muruqyada iyo soo kabashada ayaa ku riyaaqaya dhammaan kuwa buuxinaya steroid anabolic.
Soo iibso budada Nandrolone undecylate budada ka Buyaas.com
Root Nandrolone (Durabolin) budada (434-22-0)
Xashiishka Nandrolone Phenylpropionate (NPP) budada (62-90-8)
Nandrolone Qodobbada cagaarka ah (7207-92-3)
Root Nandrolone budada Laurate (26490-31-3)